Njani i $ AP Rocky ivuselelwe i-90s yeFashoni - Indlela Yokuphila
Eyona Indlela Yokuphila Njani i $ AP Rocky ivuselelwe i-90s yeFashoni
Iliwa le- $ AP.Imifanekiso kaGetty
Kwimeko apho ungakhange uqaphele, iintlobo zefashoni kunye ne-savvy purveyors bayangxola ukufumana izandla zabo kwezemidlalo esitratweni-banxibe ukusuka ngo-1990. Iimpawu ezimbini ngokukodwa zifumana izibonelelo. Ukuqikelela kunye noFila yayiziimpawu ezishushu zabantwana abangama-80s kunye nama-90s kwiSixeko saseNew York. Emva koko kwafika ii-2000s kwaye kwabonwa ezemidlalo uphawu luka-unxantathu olujonge ezantsi okanye i-bubble-letired Fila F yaba yinto engafunekiyo. Ngoku, skrolela nje kulo naliphi na iphepha lokuhlola le-Instagram ngo-2017 kwaye uza kubona imvuselelo epheleleyo iyaqhubeka ngenxa yombhali weHarlem A $ AP Rocky.
I-Rocky, impembelelo enkulu kunye nenani lenkcubeko yolutsha yanamhlanje, uye wenza njengomphefumlo womoya omtsha kuGuess noFila. Eyasungulwa kwiminyaka ye-1980, uGuess waba luphawu olukhulu lwedenim de uTommy Hilfiger noCalvin Klein jeans bakhupha ngokwenene kwiminyaka yama-90. Enkosi kukhuphiswano olukhulayo, inkampani yeGuess yathatha ukubetha kwaye isitokhwe sehla kakhulu. Kwelinye icala, i-Fila, inkampani eyasekwa phaya ngo-1909 yafumana amandla ngoo-1990s xa abantu abadumileyo abanjengoGqirha Dre baziwa ngokwenkolo banxibe uhlobo lwemidlalo. Kodwa loo nto ayikhange yenze uphawu lomzimba ukuba lukhusele umva kwii-2000s zokuqala xa ukufika kwesimbo sejean ephantsi kakhulu kwenza uFila uphawu lwentlalo yoluntu kuye nakubani na ongaphantsi kweminyaka eli-18. I-AP AP Rocky GUESS Co-Founder kunye neGosa eliyiNtloko lezoBuchule uPaul Marciano. Ifoto ngu-Todd Williamson / Getty Izithombe ze-GUESS.Imifanekiso kaGetty
Ngaphandle kokudodobala kwabo okudlulileyo, zombini iinkampani zibethe igolide ngenxa yenkxaso yoluntu nguRocky. Inkwenkwezi ye-rap yafotwa ngemidlalo engaphezulu kweFila sweatshi eParis ngemodeli uKendall Jenner kwaye ngelixa yayihleli ngaphambili kwiNew York Fashion Week. Usandula ukusebenzisana no-Guess kwaye wabonwa kwiminyhadala ephezulu yezemidlalo eyakhe Guess x A $ AP Rocky light blue denim jacket and rainbow logo'd T-shirt. Ukuvezwa okungagungqiyo kukhokelele ekubeni abantu abaninzi nangakumbi bazimisele ukuhlawula amaxabiso anga-90 kakhulu ngamaqhekeza angama-90. I-Rocky ye- $ AP: Ifoto: Todd Williamson / Getty Izithombe ze-GUESSImifanekiso kaGetty
I-Rocky ye- $ AP izuze ifashoni yakhe kudos ngokusebenzisa indlela yayo yokungakhathali kwisitayile. Indlela yakhe yokuphosa iimpahla kunye, ukuxuba iigugs zesikolo ezindala kunye ne-edgy, iziqwenga ezitsha zamnceda ukuba abe bubuso beqoqo likaDior Homme ekwindla / ebusika ngo-2016. Inkwenkwezi ikwanayo ne-Adidas endorsement phantsi kwebhanti lakhe kwaye inenkwenkwezi kwizibhengezo zeemfashini eziphezulu ezibandakanya u-Alexander Wang. Umlingo womlingo kaRocky ngumxube oyintloko-umfanekiso wakhe usemncinci kwaye akanankathalo kodwa kunye ne-upscale kunye ne-chic, into ethi intengiso yolutsha yanamhlanje ifune kwiimpawu zabo. Ungomnye wabaphembeleli abaphambili kumtshangatshangiso omtsha wefashoni, epakisha ngokugqibeleleyo ukuqaqanjelwa okuphezulu kwesiXeko saseNew York.
UFila uye wazama ukuya phambili kwezemfashini, umdlalo wezemidlalo behemoth kutshanje usebenzisene noGosha Rubchinskiy, onamaxabiso aphakathi kwibhantshi yejean yi- $ 555. Umbala obomvu nomhlophe weGosha X FILA T-1 Sneakers Rocky ubonwe enxibe kwiNew York Fashion evekini ibaleka nge-146 yeedola, ethe tyaba kwinkampani eemveliso zayo zathengiswa kwiminyaka engama-50 eyadlulayo. Ukongeza, i-average Guess X A $ AP Rocky T-shirt ibalekela ngaphezulu kweedola ezili-180 zeedola, ethe kratya kancinci xa kuthelekiswa namaxabiso asezantsi ee-2000s zakuqala.
Ngaphandle kwamathandabuzo, amanani abonisa ukuba ii-90s zenze isitayile esifana ne-phoenix, sachola ubuso obutsha endleleni. Okushiya umhlaba wefashoni uzibuza: ngaba lo ngumbuzo wokuphinda uhlaziye ngononophelo okanye okona kutsala amandla obuntu. Sicinga ukuba le yokugqibela.
‘Ngaba Nguwe Lowo?’ Ngaba Oyena Mboniso Ubalaseleyo Wokwenyani Weminyaka Elishumi, Waze Wawuphoswa
'Isikhokelo samantombazana' kuQhawulo-mtshato 'Umdibanisi ngokubhala uBoniso lokuqala lweBravo
Bungalow Bungler Emva kweeBhari
ulususa njani usulelo lwebacteria ngokwendalo
Ngaba ukujonga ngokukhawuleza ukuhlawula umrhumo
Imiboniso bhanyabhanya emitsha elungileyo ka-2017
Uisrael kamakawiwo ole kwenye indawo ngaphezulu kweengoma zomnyama